सुष्मालाई जन्मदिनको मेकअपले धोका दिएकै हो त ? बनिन् सामाजिक संजालमा ट्रोल र हासोको पात्र - Purbeli News
सुष्मालाई जन्मदिनको मेकअपले धोका दिएकै हो त ? बनिन् सामाजिक संजालमा ट्रोल र हासोको पात्र
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण ०५, २०७७ समय: १:०९:१६
इटहरी / महिला र पुरुषको सुन्दरतामा मेकअपको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सुन्दरता निखार्न मेकअप गरिन्छ । मेकअप गर्ने तरिका मिलेन भने सुन्दरता निखारिनुको साटो कुरूप हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । मेकअप आफैंमा एउटा कला हो । मेकअपको सही प्रयोगले साधारण व्यक्ति पनि विशेष देखिन्छन् । रंगिन दुनियाँमा त झन् मेकअप विनाका कलाकार भेट्न असम्भव नै हुन्छ ।
फिल्मको सुटिङ सेटमा कलाकारहरु क्यामेरा अगाडि कम, मेकअपम्यानको अगाडि बढि देखिन्छन् । एक सट सकिन साथ मेकअपम्यानले उनीहरुलाई सिंगार्न थालिहाल्छन् । अन्य समयमा पनि कलाकारहरुले मेकअपको प्रयोग दिनहुँ गरेका हुन्छन् । यो मामलामा नायकभन्दा नायिकाहरु अगाडि छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा महंगा पार्लरमा सिंगारेर मात्र उनीहरु पुग्ने गर्दछन् ।
तर, सुन्दर देखिन प्रयोग गरिने मेकअप बिग्रियो भने कस्तो देखिएला ? यसका लागि अभिनेत्री सुष्मा कार्कीलाई हेर्दा पुग्छ । आइतवार दरवारमार्गको लण्डन पब क्याफेमा उनले आफ्नो बर्थडे पार्टी राखेकी थिइन् । यो क्याफे त्यही हो, जहाँ केही दिनअघि उनीमाथि एक समुहले हातपात गरेको थियो । बर्थडे पार्टीमा मिडियाकर्मीदेखि सुष्माका नजिकका व्यक्तिहरु उपस्थित थिए ।
आफ्नो बर्थडे पार्टी, विशेष हुने नै भयो । सुष्मा विशेष भएर नपुग्ने त कुरै आएन । पार्टी सुरु हुनुभन्दा अगावै पार्लरमा सिंगारेर उनी आफ्नो जन्मदिन मनाउन पुगेकी थिइन् । तर, उनले यति हेभी मेकअप गरेकी थिइन् कि पार्टीमा उनलाई ठम्याउन धेरैले आँखा नै मिच्नु परेको थियो । उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका तस्विरमा पनि उनलाई चिन्न फोटो ‘जुम’ नगरेसम्म गाह्रो पर्छ ।
‘फुलबुट्टे सारी’को लेजेन्डरी भर्जनमा मदनकृष्णको स्वर, मिथिला सँग रोमान्स
‘फुलबुट्टे सारी’को लेजेन्डरी भर्जनमा मदनकृष्णको स्वर (भिडियाे सहित)